Taona Iray Taorian’ny Namonoana an’i Berta Cáceres, Mitohy ny Tolona Ho An’ny Tany ao Honduras – Toy Izany Koa ny Fandrahonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2017 16:00 GMT
“Fihetsiketsehana ho an'i Berta Caceres”. Fiaretantory teo am-baravaran'ny OEA tamin'ny 5 Aprily 2016. Sary an'i Daniel Cima, ho an'ny Kaomisiona Iraisan'ny Amerika momba ny Zon'Olombelona ao amin'ny Flickr. Nampiasàna ny lisansa CC 2.0
Ity no dika nasiana fanovàna tamin'ny lahatsoratr'i Laura Salas nivoaka voalohany tao amin'ny Witness. Naverin'ny Global Voices navoaka rehefa avy nahazoana alàlana tamin'ny mpanoratra.
Hatramin'ny nahafatesany, taona iray lasa izay, lasa endrika malaza manerana an'i Amerika afovoany sy ny ambiny sisa ao amin'ny tanibe amerikana ka amantarana ny tolona ho an'ny zo momba ny fanànantany ho an'ireo anjatony maro avy amin'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana i Berta Cáceres, izay nanorina ny Filankevitra sivilin'ireo fikambanam-bahoaka sy vazimba teratany ao Honduras (amin'ny teny Espaniola: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Ny 3 Martsa 2016 i Berta Cáceres no nisy namono – noho ny fahaizany mitarika amin'ny fiarovana ny faritanin'ireo vondrom-piarahamonina Lenca ao Honduras – ary navoitran'ny tatitra iray vao haingana avy amin'ny ONG iraisampirenena Global Witness ireo antsipirihany tamin'ny famonoana azy, izay mety ho tsikombakomba niraisan'ireo solontenam-panjakana ao Honduras sy ny orinasa DESA – nampisahanina ny asa fanorenana ilay tetikasa Aquq Zarca, tohodrano hakàna herinaratra. Ireto manaraka ireto ny famintinana fototra ao anatin'ilay tatitra :
1. ny fifandraisan'ny DESA tamin'ny famonoana an'i Berta Cáceres, indrindra fa olona niasa ho an'ilay orinasa ireo olona voatàna am-ponja amin'izao fotoana izao noho io raharaha io.
2. ny fifamatoran'ny tafika ao Honduras amin'ny famonoana an'i Berta Cáceres, indrindra fa olona telo avy amin'ny tafika ao Honduras ny telo amin'ireo voatàna am-ponja noho ny famonoana azy ; sy ny hoe ny filohan'ny DESA, Roberto David Castillo Mejía, dia mpiasa tao amin'ny sampam-pitsikilovan'ny tafika, ary voalaza fa ny anaran'i ûme Berta Cáceres dia hita tao anatin'ny lisitra mainty iray an'ny tafika.
Maro ireo vondrona nanerana an'i Amerika Latina sy ireo vondrom-piarahamonin'ny vazimba teratany no nanaraka ny ohatra nomen-dRamatoa Cáceres ary nipao-tsatroka ny asany amin'ny fiarovana ny tanin-dry zareo manoloana ireo orinasa goavana maro rantsana erantany izay, miaraka amin'ny fanohanan'ny fanjakàna eo an-toerana, manararaotra ny fitrandrahana ireo harena voajanahary arahana fanaovana tsinontsinona ny zon'ny olona. Amin'ny tranga sasany, toy ny an-dRamatoa Cáceres, mety hitondra hatramin'ny famoizana ny aina io tolona io.
Voafintina ao anatin'ny lahatsary eto ambany, Hetsika Amerika Afovoany 2 martsa ‘Berta Lives On (Velona Hatrany i Berta )‘ ny lova navelany :
Mpitolona aho satria avy aminà vahoaka iray izay vahoaka mpitolona ihany koa.
Eto, tena ilaina ireo teknolojia azon'ireo vondrom-piarahamonina raisina, ary ireo mpanohana an-dry zareo. Ankehitriny, ireny fitaovana ireny dia ahafahan'ireo hetsika sosialy eo an-toerana mitantara ny tantara manokan'izy ireo sy mizara ny fomba fahtàny ny zavatra mitranga, miampanga matetika ireo fanitsakitsahana mahatsiravina atao amin'ny zon'olombelona.
Izany no antony, nandritry ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona namonoana tamin'ny fomba mahatsiravaina an'i Berta Cáceres, ahatsiarovana ny sasantsasany amin'ireo asa famokarana tamin'ny haino aman-jery momba io lohahevitra io izay tsy hoe miresaka fotsiny ny lova navelany, fa koa ny tolon'ireo vondrom-piarahamonina manontolo izay isanandro vaky no miatrika fanararaotana.
Mpiambina ireo renirano
“Guardian of the Rivers” – Ny Mpiambina ireo Renirano dia fanadihadiana iray an'ilay fanentanana Tany Reny nampiroboroboin'ireo fikambanana momba ny tany, izay maniry ny “hampiseho ilay Honduras avy ao anatiny, iray amin'ireo firenena faran'izay ahitàn-doza indrindra ho an'ireo mpiaro ny harena voajanahary, tarihan'ny fotokevitra iray miompana amin'ny fitrandrahana mampandroso, izay mifanohitra amin'ny filaozofian'ny tontolon'ny vahoaka, ary manakana ity farany tsy handray fanapahankevitra momba ny tontolo iainany”. Fitanisana teny iray avy amin'i Cáceres no manokatra ilay fanadihadiana :
Izahay, vahoakan'i Lenca, dia mpiambina hatramin'ny razanay ireo renirano ary ankehitriny dia anjaranay izao ny arovan'ireo fanahim-behivavy tanora izay mampianatra anay hanolotra ny ainay amin'ny fomba samihafa hiarovana ireo renirano, ho an'ny tombontsoan'ny zanak'olombelona sy ity planeta ity.
Tsy maty i Berta, fa nitombo ho betsaka
Mitolona izahay mba ho lasa zo maha-olona ny angovo. Tokony hiditra anaty lisitr'ireo fanànana iombonana izy io ary noho izany dia tokony hanana ny anjara teniny amin'izy io ny olona. Tokony ho takatry ny olmpirenena ny antony mahatonga ny angovo hifamatotra amin'ny tohodrano, ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny rano ary ireo toerana goavana fitrandrahana solika, mba hahatakarana ny antony mahatonga ireny tetikasa ireny ho tsy ho zakan'ny lohan'ny fanjakàna.
Ireo indrindra no tenin'i Cáceres ao anatin'ity fandihadiana novokarin'ny Valalamanjohin'i Amerika Afovoany mba “Hiaina Finaritra” (Buen Vivir) ity “hanehoana ny marina sy ny zavamisy ao ambadik'ilay famonoana, mifanohitra amin'izay tian'ny fanjakàna sy ny media ao Honduras hampinoana antsika”.
Velona i Berta
Asehon'ilay fanadihadiana “Velona i Berta” mazava tsara ny fanamelohana iraisampirenena ilay famonoana feno herisetra natao azy, ireo andrana nataon'ny fanjakàna ao Honduras hanamavoana ny tolona nataony ary ny fomba fitondra feno fanavakavahana ara-poko manjo ny vahoaka Lenca ataon'ireo fikambanana iraisampirenena toy ny Netherlands Finance Development Finance Company (FMO), orinasa Holandey mpampindrana vola, izay mamatsy vola ny drafitra fampandrosoana ny fitrandrahana ao Honduras amin'ny alàlan'ireo tetikasa tahàka ireo tohodrano toherin'ny Filankevitra sivilin'ireo fikambanam-bahoaka sy vazimba teratany ao Honduras.
Ireny fanadihadiana rehetra ireny dia mampiseho fa, toa an'i Berta Cáceres, ireo rehetra mpikambana any amin'ireo vondrom-piarahamonina Lenca izay mijoro manohitra ny fitrandrahana ny faritaniny dia lasibatra noho ny fikatrohan'izy ireo, saingy avoitran-dry zareo ho hita mivandravandra ihany koa ny herin-dry zareo sy ny fahavononany. Noho ireny lahatsary ireny, ireo rehetra mpampiasa tambajotra manerana izao tontolo izao dia afaka manaraka ny tolon'ireny vehivavy ireny sy ny vondrom-piarahamoniny ho fanentanana ny vahoaka momba ny toedraharaha misy sy hampihenàna ireo loza atrehany ary hamonjena amin'ny fomba sahaza ireo loharanon-karena voajanahary arovan-dry zareo.